Wararka - Qalab joogta ah | Wararka Gadget (Bogga 5)
Kuwani waa qeexitaannada BLU Vivo XL 2
Shirkaddu wali wey ku xoogan tahay suuqa Waqooyiga Ameerika waana kuwan tilmaamaha BLU Vivo XL 2, qiime jaban laakiin waxqabad sare leh.
Hugo Barra wuxuu ku dhawaaqayaa ku biiridiisa Facebook inuu mas'uul ka noqdo Oculus
Maalmo kadib markii uu Hugo Barra ka tagay Xiaomi, wuxuu durba haystay shaqo cusub, barta bulshada ee Facebook, si uu masuul uga noqdo Oculus.
JDI waxay ku dhawaaqeysaa shaashadda LCD-ga ee balaastigga ah oo jilicsan
JDI waxay lahaan doontaa sanadka 2018 shaashadda ugu horeysa ee LCD ee suuqa taas oo noqon doonta mid si buuxda u jajaban oo leh awood ay ku jabto.
HTC ma samaynayso saacad Android Wear ah
Sidii beryahanba la sheegay, HTC waa inay soo ifbaxdaa si ay u sheegto inaysan bilaabi doonin wax smartwatch ah.
BlackBerry wuxuu joogi doonaa MWC wuxuuna ku dhawaaqi doonaa casriga cusub ee "Mercury"
BlackBerry wuxuu joogi doonaa MWC wuxuuna si rasmi ah u soo bandhigi doonaa aalad cusub oo "Mercury" ah oo suuqa soo gali doonta maalmo gudahood.
Qofka Xun 7 wuxuu sacab ka kasbadaa dadka isticmaala in kasta oo muddada "gaaban" ay tahay
Capcom mar kale ayuu sameeyay, ciyaartuna waxay kasbatay dib-u-eegis xushmad leh meel kasta oo ay tagto.
Amazon waxay ku guuleysatay magacaabis Oscar ah oo la yaab leh
Amazon waxay noqoneysaa adeeggii ugu horreeyay ee qulqulka loo magacaabay Oscar.
Sawirka LG G6 waa la sifeeyey ka hor intaan la bilaabin Febraayo 26
Haddii aad sugeysid LG G6 oo iska fogeeya qaabka LG G5, sawirkaani wuxuu kugu hogaamin karaa wadada saxda ah ee lagula kulmayo.
Asus waxay soo saareysaa Tinker Board, oo si toos ah ula tartamaya Raspberry Pi
Asus waxay soo saartay Board Tinker, oo si toos ah ula tartamaya Raspberry Pi oo leh astaamo waalan oo tixgelinaya qiimaheeda.
Android 7.0 Nougat wuxuu imaan doonaa Wiam 65 iyo 65 Lite rubuca hore
Sidaad ogtahay, shirkadda Wolder waxay ka shaqeyneysaa dimoqraadiyeynta tikniyoolajiyadda, oo kaliya ma ahan waxa ...
Hugo Barra hadda ma ahan madaxweyne ku xigeenka shirkadda Xiaomi, in kasta oo uu sii wadi doono la-taliye wax soo saaraha Shiinaha
Hugo Barra hadda ma ahan madaxweyne ku xigeenka shirkadda Xiaomi, in kastoo xilligan la joogo uu sii wadi doono inuu lataliye u noqdo soo saaraha Shiinaha.
Cilmi baarista Galaxy Note 7 waxay heshay laba dhibaato oo batteriga kala duwan ah
Natiijooyinka baaritaanka Galaxy Note 7 ee Samsung waxay muujinayaan laba dhibaato oo kala duwan oo ku jirta batariyada terminalka.
Waa maxay faallooyinka ku saabsan Facebook iyo Twitter waa dambi? Hagaha dhaqanka wanaagsan
At Actualidad Gadget waxaan rabnaa inaan si taxadar leh u falanqeyno nooca waxyaabaha ku jira Facebook iyo Twitter ee loo qaadan karo dambi
Tidal iyo fuliyayaasheeda daacad kama ahan tirooyinka isticmaalaha
Eedeymahan ku saabsan been abuurka xogta dadka isticmaala diiwaangashan ee Tidal waxay bilaabayaan inay ruxaan suuqa.
Afar filim oo laga daawado Netflix Sabtigan qabow ee Janawari
Waxaan kuu soo bandhigi doonaa afar filim oo waaweyn oo aad ku qaadan karto sabtigan qabow ee bisha Janaayo Netflix.
Xaqiiqda dhabta ah ee ku-beddelashada Nintendo waxay soo bandhigaysaa waalli internetka
Internetku wuxuu gebi ahaanba waashay suurtagalnimada in Nintendo Switch uu leeyahay muraayadaha xaqiiqda dhabta ah.
Meitu, oo ah codsi sawir qaadis ah oo kaliya u adeega in lagu xado xogtaada
Meitu, oo ah codsi shaandheyn sawir qaade ah oo umuuqda mid aad u xiiso badan, laakiin ujeeddadeeda kaliya ay tahay helitaanka dhammaan xogtaada
Movistar wuxuu ku dhawaaqayaa baahinta 4K sanadka 2017 wuxuuna soo bandhigayaa Yamaha MotoGP
Movistar wuxuu baahin doonaa inta lagu guda jiro sanadkan 2017 nuxurka ugu horreeya ee 4K "lagu sameeyay Spain", barnaamijka Movistar + waa la casriyeyn doonaa iyadoo la qaadanayo teknolojiyaddii ugu dambeysay.
TAG Heuer ayaa bilaabi doonta smartwatch cusub bisha May iyada oo ay weheliso Android Wear 2.0
Android Wear 2.0 ayaa la filayaa inuu noqdo nooca software-ka ee daawashada cusub ee TAG Heuer ee la sii deyn doono bisha Maajo.
Samsung Galaxy A 2017 hadda waxaa laga heli karaa Spain
Samsung Galaxy A 2017 wuxuu imaan doonaa wadankeena Febraayo 3, oo leh naqshad cusbooneysiin iyo qeexitaan casriyeysan.
Iibinta kombiyuutarka ayaa hoos u dhacaya sanadkii shanaad oo isku xiga
Beddelayaal iyo kiniiniyada nidaamka shaqeeya oo buuxa ayaa hareeyay suuqa PC-ga oo dhacay sanadkii shanaad oo xiriir ah.
Super Mario Run waxaa laga heli doonaa qalabka Android bisha Maarso
Weli ma jiro taariikh rasmi ah oo imaatinka Super Mario Run ee qalabka Android, laakiin waxaan ognahay inay dhici doonto bisha Maarso.
Muraayadda hore loo mooday ee Samsung Galaxy S8 ayaa la sifeeyey
Waxaan leenahay daadad cusub oo cusub waana inay la xiriirtaa sawirka guddiga hore ee Samsung Galaxy S8 iyo S8 Plus, oo ah calanka sanadka.
Microsoft waxay u keentaa Cortana shaashadda qufulka ee wixii Android ah
Tallaabadii ugu dambeysay ee Microsoft ay ku shaaciso Cortana aaladaha Android waa inay si toos ah ugu keento shaashadda qufulka.
Movistar + wuxuu si xoog leh ugu tartamayaa taxanaha iyo weerarada Netflix
Movistar + wuxuu sameyn doonaa maalgashi xoog leh sanadka 2017 oo ay la socdaan 14 taxane cusub iyo miisaaniyad ka badan 100 milyan oo euro.
Saddex fiidiyow oo Samsung ah ayaa muujin kara Galaxy S8
Galaxy S8 wuxuu ku sigtay inuu kuuskuusho maraqa isagoo wata taxane dhan oo daadis ah iyo ogeysiisyo ka imanaya meelkasta sida waqtigan Samsung Display
Dakhliyada ka soo baxa App Store iyo Google Play ayaa sanadkii la soo dhaafay kor u kac weyn ku yimid
Dukaammada Google iyo Apple barnaamijyadooda waxay ku arkeen koror cajiib ah waqtiyadii la soo dhaafay marka la barbar dhigo 2015
Tani waa sida Xbox One S u noqdo mid si fudud loo qaadan karo
Benjamin Heck wuxuu abuuraa farshaxanno run ah sida Xbox One S oo la qaadan karo oo leh shaashad gudaha ku jirta iyo naqshad cajiib ah.
Raspbery Pi Compute Module 3 waa ilaa 10 jeer ka dhakhso badan
Raspberry Pi CM 3, waa guddi ilaa toban jeer ka awood badan qaabkii hore taasina way ka farxin doontaa dadka isticmaala.
Nest, ugu dambeyntii, wuxuu yimaadaa Spain inkasta oo uusan ku jirin gabi ahaanba alaabteeda alaabada
Sanado badan oo sugitaan ah ka dib, Nest wuxuu ugu dambeyntii Spain ku soo degaa dhowr shey oo ka mid ah waxyaabaha ugu xiisaha badan ee la xiriira otomatiga guriga.
Qiimaha SSD-yada adag ayaa dhowaan koraya
Kadib bilooyin hoos udhac macquul ah oo kuyimid qiimaha iyo kaydinta keydka, waxay umuuqataa in qiimayaashu si aad ah kor ugu kici karaan
Samsung Galaxy S8 waxaa la soo bandhigi lahaa 29-ka Maarso waxaana la sii daayay dabayaaqada Abriil.
29-ka Maarso waxay umuuqataa taariikhda cusub ee soo bandhigida Samsung Galaxy S8 oo la soo bandhigi doono bisha Abriil ee dhamaadka.
Markale lambarka sirta ah 123456 ayaa ahaa kii ugu badnaa ee la isticmaalo 2016
Sannadka laba iyo tobnaad ee isku xiga, erayga sirta ah ee adeegsadayaashu isticmaalaan sanadkii la soo dhaafay wuxuu ahaa 123456
Wicitaanada codka ayaa si dhaqso leh ku imaan doona Telegram sida uu xaqiijiyay agaasimaheeda
Maamulaha Telegram wuxuu ku dhawaaqay in wicitaanada codku ay si dhakhso leh ku imaan doonaan arjiga fariimaha degdega ah, taas oo shaki la’aan ah war weyn.
LG G6 wuxuu kudarsan doonaa tikniyoolajiyad cusub oo kuleylka lagu baabi'iyo
LG G6 wuxuu noqonayaa terminal-kii ugu horreeyay ee LG ah ee qaada tiknoolajiyad cusub oo lagu baabiyo kuleylka sida Galaxy S7 iyo kuwa kale.
Dhaqso, Netflix ayaa ka saari doonta dhammaan waxyaabahaan inta lagu jiro bisha Janaayo
Waxaan ku xasuusinaynaa kuwaas oo ah filimada iyo silsiladaha ay Netflix ka bixi doonto Janaayo 2017 sidaa darteed ha u seegin.
League of Legends wuxuu ku dhuftey 1.000 bilyan saacadood Twitch
League of Legends shaki la'aan waa kan ugu guuleysiga badan dhammaan cayaaraha fiidiyowga ee la raaco, horeyba wuxuu u gaarey 1.000 milyan saacadood
Nooca mobilada ee Titanfall ayaa si joogto ah loo joojiyay
Iyagoo la soo dersa sidan oo kale, waxay doorteen inay tirtiraan nooca mobilada ee Titanfall oo ay si joogto ah u aasaan badeecada.
Esports waxay ka badan tahay ACB ama Copa del Rey
Markii ugu horeysay, eSports waxay ka badan yihiin horyaalada sida ACB ama dhacdooyinka sida La Vuelta Ciclista a España.
Foxconn waxay ku wajaheysaa Mareykanka iyadoo la raacayo warshad guddi LCD ah
Warbaahinta qaar waxay muujinayaan in Foxconn, oo ah shirkad hoosaad ka ah shirkadda Sharp, ay ka fekereyso furitaanka warshaddeeda ...
YouTube wuxuu bilaabay Super Chats si loo dejiyo faallooyinka lacagta lagu bixiyo ee tooska loogu sii daayo
YouTube ayaa maanta bilaabay muuqaalka Super Chats kaas oo kuu ogolaanaya inaad ku dhajiso faallooyinka dusha sare ee sheekada tooska ah.,
Sony waxay dib u dhigeysaa soo bandhigida dhageysiyadeeda Platinum-ka ee loogu talagalay PS4
Muuqaaladda Kooban ee Wireless-ka ee 'Sony' ee loo yaqaan 'Platinum Wireless Headsets' ayaa dib u dhac ku yimid si loo sii daayo dalka Mareykanka iyadoo ogeysiis la'aan.
Barcelona ayaa ka caan baxday Madrid marka loo eego barta Instagram
RRSS waxay had iyo jeer ka tagtaa xog xiiso leh, midkii ugu dambeeyay ee aan awoodnay inaan helno waa xaqiiqda ah in Barcelona ay aad uga caansan tahay Madrid
Raadiyaha FM ayaa bilaabay inuu dhinto, Norway waxay horseed u tahay jarista qiiqa
Noorway waxay rabtay inay horseed ka noqoto daminta raadiyaha FM-ka, waxay kubilaabantay geedi socod waji leh oo socon doona sanadka 2017 oo dhan.
Xarumaha Google ee Chile waxaa gebi ahaanba ku shaqeeya tamarta qorraxda
Google waxay dhawaan shaacisay heshiiska ay la gashay Acciona Energía si ay xafiisyadeeda iyo datacenter-keedaba uga dhigto mid ku shaqeeya tamarta qoraxda.
Samsung ayaa bilaabi doonta taleefan casri ah oo la laaban karo rubuca saddexaad ee sanadkan
Samsung taleefanka gacanta ee isku laaban ayaa run noqon doona markii uu soo baxo rubuca saddexaad ee sanadka. Qalab loogu talagalay Westworld.
Isniintii la soo dhaafay xiddig cirif ah ayaa ku sigtay inuu dhulka ku dhufto iyadoo cidna aysan ogeyn
Isniintii la soo dhaafay cirbixiyeen a ku dhow 34 mitir dhexroor ah wuxuu ku sigtay inuu dhulka ku dhaco. Waxaa daahfuray NASA galabnimadii Sabtida.
Warbixintii ugu dambeysay ee Google ee ku saabsan Android waxay xaqiijineysaa luminta Android 2.2 Froyo
Google ayaa daabacday warbixin cusub oo ku saabsan Android, taas oo xaqiijineysa in la waayey Android 2.2 Froyo iyo duulimaadkii nugul ee Nougat.
1,5 milyan oo xisaab-celin ladagaalanka ah ayaa la jabsaday
Hackers ayaa la wareegay in ka badan 1,5 milyan oo ah xisaabaadka 'Counter-Strike GO', taasoo halis gelineysa barnaamijka ESEA.
Shirkadda Huawei ayaa horumarisay Samsung dhanka iibka dalka Spain markii ugu horreysay
Shirkadda Shiinaha ayaa ah hoggaamiyihii ugu horreeyay ee iibinta taleefannada gacanta ee Spain, sidaasna ku jabisay Samsung, oo u muuqatay mid aan dhaqaaqaynin jagadaas.
Meizu ayaa joojin doonta adeegsiga processor-rada Qualcomm ee casriga ah
Madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka shirkadda ayaa shir ay ku yeesheen warbaahinta qaarkeed ka hor ku xaqiijiyeen in shirkaddu joojin doonto adeegsiga processor-ka ...
$ 25.000 oo lagu beddelayo macluumaadka ku saabsan noocyada noocyada ah ee laga xaday Razer ee CES 2017
Tani waa mid ka mid ah wararkaas aynaan jeclayn gabi ahaanba waana tan wixii ka dambeeyay ...
Samsung Galaxy S8 ayaa la iibin doonaa Abriil 18
Dhowr xanta culus ayaa soo jeedinaysa in Galaxy S8 uu suuqa soo gali karo Abriil 18 waxaana lagu soo bandhigi doonaa MWC ee magaalada Barcelona.
Tani waa sida Xaaladda WhatsApp ay u shaqeyso
Xaaladda WhatsApp waa nooca sheekooyinka ee 'Instagram' iyo muuqaal cusub oo ku dhowaan lahaa maalmo ama toddobaadyo.
HTC waxay sii socotaa inay si hagar la'aan ah u dhacdo sida qiyaasaha iibka 2016 ay muujinayaan
Haddii ay jirto shirkad mareysa waqtigeedii ugu xumaa kan shaki la’aan waa shirkadda HTC. Shirkadda Taiwanese ma ...
WhatsApp horeyba wuxuu kuu ogolaanayaa inaad dirto 30 sawir hal mar
Illaa iyo hadda waxay ahayd suurto gal oo keliya in 10 sawir hal mar laga diro WhatsApp, laakiin taasi waa taariikh waxaana soo diri karnaa illaa 30 sawir.
"Altaba" wuxuu noqon doonaa magaca cusub ee Yahoo oo aan mar dambe yeelan doonin Marissa Mayer oo ah agaasime guud
Yahoo ayaa magaceeda u badali doonta Altaba, Marissa Mayer oo ah agaasimaha guud ee hada ayaa xilka ka dagi doonta iyadoo isku dayaysa inay fuliso abaabul cusub.
LG Display wuxuu ku dhawaaqay shaashadda 5,7 ″ QHD + LCD oo leh saamiga 18: 9
LG Display ayaa mas'uul ka ah sameynta shaashad cusub oo loogu talagalay taleefannada casriga ah ee loo yaqaan 'QHD + LCD' oo u dhiganta 18: 9 taasna waxaa isticmaali doona LG G6
Kaaliyaha la waayey si loo buuxiyo liiska, Viki kaaliyaha cusub ee Nokia
Viki waa sharad kaaliyaha Nokia inuu si toos ah ula tartamo xulashooyinka kala duwan ee aan ka heli karno ...
Huawei wuxuu sii wadaa inuu sii kordho, isagoo biil ka qaata 42% sanadkii 2016
Huawei wuxuu sii wadaa inuu koro sanadki shanaad oo xiriir ah, isagoo helay rikoodh rikoodh ah sanadkan gudihiisa 2016.
Samsung Galaxy S8 waxaa lagu soo bandhigi karaa magaalada Barcelona waxaana la soo saari karaa bisha May
Sannadkan 2017 waxaa ka buuxi doona warar hubaal ah mid ka mid ah shirkadaha aan rajaynayno inaysan fashilmin waa ...
Khiyaanadan cusub ee WhatsApp ayaa durba khiyaanaysay in ka badan 260.000 oo isticmaale
Khiyaano cusub ayaa gilgishay WhatsApp oo durba saameysay in ka badan 260.000 oo isticmaale isla markaana balan qaadaya inuu sii wadi doono dagaalka maalmaha soo socda.
Kani waa moobilkii ugu horreeyay ee Nokia ah oo wata Android, Nokia 6
Nokia 6 waa taleefankii ugu horeeyay ee Nokia ah ee lagu soo saaro Android, inkasta oo xilligan la joogo kaliya laga heli karo Shiinaha markii uu yimid usbuucaan.
ASUS waxay soo bandhigaysaa ZenFone AR oo ay weheliso Project Tango
ASUS waxay leedahay terminal cusub oo bartilmaameedsanaya Google Tango xaqiiqda lagu kordhiyay ZenFone AR iyo seddexdeeda kamaradood ee gaarka ah.
Toshiba wuxuu soo bandhigayaa 2-in-1 cusub oo la yiraahdo Portege X20W
Toshiba ma rabin in laga tago oo waxay soo bandhigtay qalab casri ah oo la yiraahdo Portege X20W.
Fenix ​​5 waa noocyada cusub ee smartwatches ee Garmin
Aynu eegno Fenix ​​5, kuwan cusub ee cajiibka ah ee Garmin oo leh astaamahooda oo dhan
Qualcomm wuxuu soo bandhigayaa Snapdragon 835 oo leh sideed buundo, Quick Charge 4.0 iyo in ka badan oo ah CES
Snapdragon 835 Chip waxaa loo rogay 10nm naqshadaha iyo 8 cores si loogu muujiyo inay tahay SoC raadineysa waxtarka tamarta iyo Quick Charge 4.0
Wadaagista baabuurtu waxay yareyn doontaa taraafikada 75% marka loo eego MIT
Marka, aan ogaano waxa MIT uga fikirayso gaadhiga iyo sida ay u saamaynayso nolol maalmeedkeena.
Cusbooneysiinta Windows 10 Abuuraha ayaa dib loo dhigi karaa illaa Abriil
Cusboonaysiinta xigta ee Windows 10, oo loo yaqaan Cusboonaysiinta Abuureyaasha, ayaa umuuqata inay dib u dhigeyso sii deyntiisa illaa Abriil ee sanadkan.
BlackBerry Mercury ayaa lagu soo bandhigi doonaa CES oo ku taal Las Vegas
CES-ta Las Vegas waxay kubilaabi doontaa taleefanka casriga kumbuyuutarka jirka ee loo yaqaan 'QWERTY keyboard' oo loo yaqaan BlackBerry Mercury
Dell wuxuu diyaarinayaa XPS 13-inji cusub ah oo la beddeli karo
Shirkadda Dell waxay qorsheyneysaa inay soo saarto nooc cusub oo 13-inji ah oo loo yaqaan 'XPS' kaasoo la beddeli karo isla markaana ka farxin doona dad badan oo xirfadlayaal ah
Kuwani waa ka-reebitaannada imaan doona PlayStation 4 ee 2017
Aynu eegno liiska waxyaabaha ka-reebista ee sanadkan imaan doona buugga PlayStation 4.
Iibsigii ugu horreeyay ee 2017 ee Amazon waxaa laga sameeyay El Ejido (Almería)
Nin dhalinyaro ah oo ku nool El Ejido, oo ah degmo ku taal gobolka Almería oo go'aansaday inuu hoggaamiye ka noqdo iibsashada Amazon intii lagu jiray 2017
Qualcomm wuxuu soo bandhigayaa faahfaahinta Snapdragon 835 chip
Shirkadda Qualcomm ayaa soo bandhigtay faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan qalabka loo yaqaan 'Snapdragon 835 chip' oo lagu soo bandhigi doono CES oo ku taal Las Vegas maalmaha soo socda ee bisha Jannaayo.
Tani waa sida Facebook ogyahay inaad jeceshahay ku dhowaad adiga kahor
Qaabka aan u isticmaalno Facebook iyo waqtiga aan ku bixino shabakada bulshada si weyn ayaa loo badalay ka hor inta aan la bilaabin xiriir
Nagala raaxayso hordhacayada Netflix bisha Janaayo 2017
Waxaan bixin doonnaa dib u eegis muhiim ah kuwaas oo ah horudhacyada ay Netflix noo diyaarisay intii lagu jiray bishii Janaayo ee sanadkan 2017.
Lixda meelood ee ay tahay inaad iska ilaaliso taabashada diyaaradda rakaabka
Aynu raacno, waxaan kuu soo bandhigeynaa lixda meelood ee ugu wasakhda badan diyaaradda rakaabka.
Noocii ugu horreeyay ee aan rasmi ahayn ee loo yaqaan 'Lineage OS ROMs' ayaa hadda la heli karaa
OSage-ka OS wuxuu kala wareegay CyanogenMod oo meesha ka baxay oo ROM-kii ugu horreeyay ee aan rasmi ahayn ee mashruucan hadda waa la soo dejin karaa.
Kuwani waa ciyaaraha PlayStation Plus ee bisha Janaayo 2017
Aynu eegno waa maxay cinwaannada ay PlayStation Plus na siiso bishan Janaayo 2017.
Uber waxaa loo tixgelin doonaa taksi marka la eego xayiraadaha taraafikada ee Madrid
Waxay amartay in la joojiyo tallaabooyinka la soo rogay ee aan u oggolaanaynin gawaarida sida kuwa loo isticmaalo Uber ama Cabify inay ku dhex wareegaan Madrid.
Tiknoolajiyadda gaariga xamuulka ah ayaa ka hor istaagtay weerarkii Berlin inuu dhiig badan ku daato
Tiro dhibanayaal ah oo si aad ah uga sii badnaan lahaa hadaanay ahaan lahayn joogsiga ismaamulka gawaarida, oo kicisay bareegyada otomaatiga ah.
Super Mario Run-diiwaangelin hore ayaa hadda laga heli karaa Google Play Store
Super Mario Run ayaa hadda laga heli karaa Google Play Store si aad u diiwaangeliso oo aad u feejignaato soo bandhigideeda Android.
Autopilot-ka Tesla wuxuu ogaadaa shil daran wuxuuna badbaadiyaa duuliyaha
Gawaarida gawaarida ee 'Tesla Model S' waxay ka fogaadeen shil aad u badan oo shil geeri ah oo aan dhicin.
Lenovo ThinkPad x270, wuxuu bixin doonaa ilaa 20 saacadood oo nolosha batteriga ah
Lenovo ayaa dhamaan kaararkeedii miiska saartay arinka waxayna na tusaysaa laptop la siinayo wax aan ka yarayn 20 saacadood oo ismaamul ah.
Hadda waxaad ku soo dejisan kartaa fiidiyowyada Netflix darawalkaaga adag qalabkan
Aynu jaleecno barnaamijkan cusub ee noo oggolaanaya inaan ku kaydin karno wax filim Netflix ah ama taxane ah dirawalkeenna adag
Tuenti waxay ka kacdaa dambaska waxayna iibsataa Facebook si ay u kacdoomiso shabakadaha
Facebook, oo bilaha soo socda qaadan doonta aqoonsi cusub oo ay ku jiri doonto isbeddelo ku saabsan is-dhexgalka iyada oo ay sabab u tahay helitaankeeda shirkadda Tuenti.
Shaqaale hore uga tirsanaan jiray Google ayaa dacwad ku soo oogay shirkadda basaasnimo uu ku sameeyay intii uu shaqeynayay
Shaqaale hore uga tirsanaan jiray Google ayaa dacwad ku soo oogay shirkadda isagoo ku andacoonaya inay adeegsaneyso basaasnimo si loola socdo waxa shaqaalaheeda ay sameynayaan waqti kasta.
LG iyo labadeeda khamaaris ee layaabka leh ee loogu talagalay maqalka: afhayeenka levitates iyo silsilad
LG wuxuu keeni doonaa CES 2017 Las Vegas silsilad ay kujiraan 4 kuhadlaya iskudhafan iyo sameecad laqaadankaro oo ka faaiidaysanaysa salka mahadnaqa electromagnets.
Sannadka masiiriga ah ee 2016 wuxuu qaadan doonaa ilbidhiqsi kale si loo dhigo saacadaha
Ilbidhiqsi dheeri ah waa in lagu daraa Diisambar 31, 2016 si aad awood ugu yeelatid inaad waqtiga si buuxda u saxdo.
HMD waxay higsaneysaa inay soo bandhigto ugu yaraan 5 taleefan oo Nokia ah Q2017 XNUMX
Nokia waxay lahaan doontaa ilaa 5 taleefan oo magaceeda la yiraahdo Q2017 1, oo ka bilaabaneysa Nokia DXNUMXC oo ka socota Mobile World Congress.
Khariidadaha Google hadda waxay kuu oggolaaneysaa inaad ka raadiso musqulaha dadweynaha ee Hindiya
Adeegga khariidaynta Google ayaa bilaabay inuu soo bandhigo macluumaadka ku saabsan musqulaha dadweynaha ee laga heli karo magaalada New Delhi.
Windows 10 ayaa noo oggolaan doonta inaan ku darno faylal codsi ah liiska bilowga
Mid ka mid ah howlaha cusub ee Windows 10 Abuurayaashu Studio noo keenayaan ayaa ah suurtagalnimada abuurista faylal leh codsiyo ku qoran liiska bilowga dusiyeen.
Shisheeyaha: Axdigu wuxuu horey u leeyahay trailer, naftaada ha lagu kaxeeyo shakiga
Waxaan kaaga tagnay trailer-ka Shisheeyaha: Co adehun si aad wax yar oo cabsi ah u yeelatid intaad filimka sugeyso.
Kuwani waa iibka ugu fiican ee ciyaaraha PS4-ka Kirismaskan
Aynu eegno iibka kirismaska ​​ee ugu wanaagsan dukaanka dhijitaalka ah ee 'PlayStation'.
Imaatinka Galaxy S8 ee suuqa wuxuu la macno noqon doonaa in la waayo qoyska Galaxy Note
Imaatinka suuqa Galaxy S8 ee soo socda ayaa ka dhignaan doonta in Samsung ay soo afjarayso qoyska Galaxy Note ee dhibaatooyinka badan bixiyay.
Firefox waxay joojin doontaa taageerida Windows XP iyo Vista bisha Sebtember 2017
Firefox waxay ku dhawaaqday inay joojinayso taageerida dhamaan PC-yada sii wada isticmaalka Windows XP ama Windows Vista laga bilaabo Sebtember 2017
DGT waxay durbaba baraneysaa imaatinka gaariga iskiis u shaqeynaya ee Spain
Agaasinka guud ee taraafikada ee Isbaanishka ayaa durbaba ka shaqeynaya sidii wadada loogu xaadhi lahaa wadista iskiis u madaxbanaan ee Spain.
KFC waxay ku tijaabisaa nidaam aqoonsi wajiga makhaayadaha ay ku leedahay Shiinaha
KFC waxay rabtaa inay na dalbato, waxay noo oggolaan doontaa inaan la macaamilno mashiinka oo keliya iyadoo noo oggolaaneysa inaan wax aragno, taas oo ay ugu wacan tahay aqoonsiga wajiga.
Hubi waxa barowsarkaagu ka og yahay adiga
Haddii aad rabto inaad ogaato dhammaan macluumaadka aad ka bixiso laptop-kaaga ama aaladda gacanta, booqo websaydhkan tijaabada ah oo aad u xiisaha badan.
Toy The kaamil ah, a Tesla Model S in size yar yar ee guriga ku jira
Tusaalahan yar ee loo yaqaan 'Tesla Model S' oo leh astaamo aad u xiiso badan oo aan qaadan doonin boos aad u fara badan oo ku yaal garaashkeena.
Waxay xadaan xogta Rugta Ganacsiga Madrid iyagoo jabsanaya shabakadda
La Nueve waa koox burcad ah oo mas'uul ka ahaa inay hareer maraan "amniga" bogga internetka ee Rugta Ganacsiga Madrid.
Vodafone waxay siisaa macaamiisheeda wicitaano aan xadidnayn oo bilaash ah 24 iyo 31 ee soo socda
Vodafone waxay u fidisaa macaamiisheeda bisha Diseembar 24 iyo 31 wicitaano aan xadidneyn oo bilaash ah si ay ugala hadlaan waxa ay rabaan iyadoon kantarool lahayn.
LG wuxuu ku dhawaaqay 4 taleefano oo taxane ah iyo Stylus 3 oo wata stylus iyo Nougat
LG's Stylus 3 waa taleefan casri ah oo wata Pen Stylus wuxuuna weheliyaa afar mobiles oo cusub oo K ah oo laga leeyahay shirkadda Kuuriya.
Nintendo wuxuu xaqiijinayaa inaysan jiri doonin wax la soo degsan karo oo lacag leh oo loogu talagalay Super Mario Run
Super Mario Run ayaa kaliya suuqa ku jiray maalmo yar, laakiin waxay ku filnaadeen Nintendo inay xaqiijiyaan inaysan jiri doonin waxyaabo dheeri ah oo ciyaarta ah.
Natiijooyinka raadinta Twitter ayaa hadda lagu muujiyaa tixgelinta tweets
Laga bilaabo maanta, natiijooyinka raadinta ee Twitter-ka ayaa loo habeeyay si loo muujiyo kuwa ugu habboon sida ku xusan shabakadda bulshada ee farriimaha yar yar.
Tani waa sida loo xado Tesla iyadoo la jabsanayo barnaamijkeeda moobiilka
Xatooyo Tesla iyadoo la adeegsanayo nooc la jabsaday ee codsigeeda oo kuu ogolaanaya inaad xakameyso gaariga waa wax fudud sida ku cad fiidiyowgan.
Telefishanka Nvidia Shield Android TV ayaa imanaya laba qiyaasood sanadka 2017
Nvidia waxay diyaarineysaa labo Gashad oo loo yaqaan 'Android Shield Android TV' sanadka 207, oo leh cabirro kala duwan iyo masaafo cusub si aan uga ciyaarno sariirta
Xiaomi wuxuu soo bandhigi doonaa Mi Notebook bisha Diseembar 23
Jimcaha soo socda waxaan balan la leenahay qalab cusub oo Xiaomi ah, kaas oo noqon doona Mi Notebok cusub oo dhameystiri doona kuwii horey ugu sugnaa suuqa.
Mega Man wuxuu imaan doonaa Android bisha Janaayo isagoo wata lix cinwaan oo asal ah
Ugu dambeyntiina, waxaan lahaan doonnaa Mega Man taleefanka gacanta, iyo gaar ahaan Android. Bisha Janaayo waa ta ay dooratay shirkadda 'Capcom' si loo bilaabo.
Nintendo Switch wuxuu hoos u dhigi doonaa waxqabadka GPU marka loo isticmaalo laptop
Dock-ka ma aha wax ka badan saldhig, laakiin xawaaraha Nvidia GPU ayaa hoos u dhacaya markaan ka soocno.
Super Mario Run, ciyaar aad uga fog wixii aan filaynay iyo wixii ka sarreeya wixii aan dooneynay
Waxaan isku daynay Super Mario Run, nasiib darose waa ciyaar aad uga fog wixii aan wada filaynay iyo gaar ahaan wixii aan dooneynay ee aan rabnay.
BlackBerry Mercury waxaa si rasmi ah loogu soo bandhigi doonaa CES 2017
BlackBerry Mercury waxaa si rasmi ah loogu soo bandhigi doonaa CES 2017 ama waxay umuuqataa sida ku cad macluumaadka ugu dambeeyay ee TCL.
LG wuxuu soo bandhigayaa kiniinka LG G Pad III 10.1 $ 360 oo ah nooca LTE
LG wuxuu leeyahay kiniin cusub oo ku jira buugiisa: LG Pad III 10.1. Mid ka mid ah waxyaabaha gaarka loo leeyahay ayaa ah inay leedahay 4 qaab qaab
Mercedes Croove, wadaag oo ijaar gaarigaaga si fudud
Mercedes Croove, oo ah wado looga dhigo Mercedes-kaaga mid faa'iido leh, waad kireysan kartaa oo si fudud ugula wadaagi kartaa codsigan
Telefoonkaaga la xado oo duub dukumiinti ku saabsan tuugga
Nin reer Holland ah ayaa sababay in mobaylkiisa la xado isagoo ujeedkiisu yahay inuu abuuro dokumentari ka hadlaya nolosha tuugga aaladda
Khariidadaha Google ayaa soo bandhigi doona haddii meelaha la heli karo ay yihiin kursi curyaan
Cusboonaysiinta ugu dambaysa ee Khariidadaha Google dhammaanteen waan jecel nahay, waana taas oo calaamadeyn doonta haddii meel lagu mari karo kursiga curyaamiinta ama dhaqdhaqaaqa oo yaraaday.
Diisambar ayaa soo bandhigaya Netflix si loo helo usbuuc wanaagsan
Tani waa ururinta yar ee ugu fiican ee aan ka heli karno horudhaca bisha Diseembar ee Netflix.
Apple waxaa lagu qasbay inay maal gasho 44 milyan oo doolar si ay ugu awoodaan inay ku iibiyaan Iphone gudaha Indonesia
Apple waxay heshiis la gashay dowladda Indonesia si ay u hesho go-goynta isla markaana ay ugu iibin karto dalka iphone-ka.
Super Mario Run waxaa ku hareereysan muran iyo dib u eegisyo xun oo ku saabsan App Store
Waxay umuuqataa inay jireen isticmaaleyaal badan oo aan wali ka warqabin xaqiiqda ah in Super Mario Run uusan xor aheyn, taas oo kadhigtay inay xanaaqsan yihiin.
Dropbox wuxuu joojin doonaa awoodda lala wadaago faylalka dadweynaha
Ragga ku jira Dropbox waxay u dirayaan emayl dhammaan macaamiisha koontada bilaashka ah iyagoo ku dhawaaqaya dhamaadka faylalka la wadaago bisha Maarso 2017
Android 7.0 Nougat ee loogu talagalay Sony Xperia X iyo X Compact
Way cadahay in cusbooneysiinta nooca ugu dambeeya ee nidaamka hawlgalka Android ay qaadanayso waqti aad u dheer inay ku faafto inta u dhexeysa ...
Kickass Daadadka ayaa dib uga soo cusboonaaday deegaan cusub
Wax yar uun ka yar nus sano kadib markii la xiray goobta caanka ah ee Kickass Torrents, waxaa dib uga dhashay dambaska iyadoo ...
Verizon way fududahay markasta oo la joojiyo qandaraaska iibsiga Yahoo
Verizon waxay mar kale isku dayeysaa inay joojiso nidaamka iibsiga Yahoo kadib fadeexadii ugu dambeysay ee soo galitaanka xadeynta.
Gatebox wuxuu kugu barayaa Hikari, kaaliyaha ugu caansan ee holograafiga ah
Gatebox waa jawaabta loo yaqaan 'Amazon Echo' iyo 'Google Home' oo ah kaaliye farsameed, inkasta oo ay ku kala duwan yihiin: waa dabeecad holographic
Uber waxay sii deyneysaa tagaasida iskeed u shaqeysa ee San Francisco iyadoon fasax laga heysan "waana la qabtaa"
Uber wali waxay tijaabineysaa taksiiladeeda gaarka ah ee Mareykanka, laakiin markan waxay umuuqataa inay sameynayaan iyadoon ...
Kani waa kan ugu badan ee laga raadiyay Google intii lagu jiray 2016
Waxaan ogaan doonnaa kuwee ahaa baaritaanadii ugu badnaa ee laga sameeyo Spain inta lagu gudajiray sanadkan 2016 sida ay sheegtay shirkadda lafteeda.
Baro sida looga hortago shaqaalaha Evernote inay akhriyaan qoraaladaada
Evernote wuxuu beddeli doonaa tilmaamaha u gaarka ah, isagoo u oggolaanaya shaqaalaha inay akhriyaan qoraaladaada; baro sida looga hortago
Seedo, waa aqalka dhirta lagu koriyo ee loo yaqaan 'hydroponic greenhouse' oo noo oggolaan doona inaan ku beero wax kasta oo aan dooneyno, haa, sidoo kale marijuana ...
Google waxay timid Cuba iyadoo ujeedkeedu yahay inay horumariso adeegyadeeda
Google waxaa ka go'an inay horumariso server-yada iyo adeegyada internetka ee ay ku bixin doonto halkaas iyadoo lagu saleynayo heshiis cusub.
Ku raaxayso muuqaalkan cajiibka ah ee ka soo ifbaxay midowgii u dhexeeyay koonka DC iyo Star Wars
Maanta waxaan kuu soo bandhigeynaa mashup aad u qurux badan oo ka soo baxay midowgii u dhexeeyey caalamka DC iyo Star Wars oo uu abuuray Zack Snyder laftiisa.
Apple AirPods ayaa suuqa soo galay waxaana hada laga iibsan karaa Spain
AirPods horeyba waa rasmi oo waxaad horeyba ugu iibsan kartaa qiimo dhan 179 euro, in kastoo aadan heli doonin ilaa 20-ka Disembar ee soo socota.
Kubadda gacanta ama kubbadda koleyga midkoodna, League of Legends ma buuxin doono Palau Sant Jordi
League of Legends Allstars oo lagu qabtay Palau Sant Jordi muddo afar maalmood ah ayaa isu keenay ciyaartooyda adduunka ugu fiican, iyo kuwa raacsan.
Netflix, Amazon iyo HBO waxay xaaqeen magacaabista Golden Globe
Wax aan ka yarayn 70% ee magacaabista Golden Globes waxaa qaadaya taxanaha Netflix, Amazon iyo HBO.
Waqtiga popcorn, xumaanta kugu qasbeysa inaad u hurto saaxiibbadaa
Waxay hubisaa faafitaanka ugu caansan ee infekshinka weligiis la arko, waxayna kugu martiqaadeysaa inaad qabato shaqada wasakhda ah ee ku faafineysa furinteeda.
Taariikhda tirtir akoonadaada isticmaale si deg deg ah mahad Deseat.me
Waad ku mahadsan tahay codsigan shabakadda, waxaan tirtiri karnaa xisaabaadka isticmaalaha ee aan ka diiwaan gelinnay Gmail dhowr tallaabo oo fudud, dhib la'aan.
Niantic wuxuu ku dhawaaqayaa imaanshaha Pokémon cusub iyo Christmas Pickachu
Pokémon-ka cusub ayaa horeyba uga run ahaa Pokémon Go, waxayna isla yimaadeen iyagoo wata Pickachu-ka Kirismaska ​​oo aad ku degdegi doonto ugaarsiga
ChromeOS iyo Android waxay aadi doonaan wadooyinkooda gaarka ah
Wararka xanta ah ee ku saabsan midowga suurtagalka ah ee ChromeOS iyo Android waxaa diiday Hiroshi Lockheimer, marka waan iska fogeyn karnaa fikirka Andromeda
Samsung Pay Mini ma dhaafayo jarista waxaana laga reebay macruufka
Dagaalka u dhexeeya shirkadda South Korea ee Samsung iyo Apple-ka Mareykanka ma ahan wax cusub. Dhamaan xaadirka ...
HDMI 2.1 iyo HDMI heerka Alt si loogu bilaabo CES 2017
Waxaan durba bilaabaynaa inaan helno warar ku saabsan CES-ta soo socota ee Las Vegas kiiskan waxaan nahay kahor imaatinka ...
Ka tirtir Airpods-ka warqadda ku socota Magi maxaa yeelay lama heli doono ilaa Kirismaska ​​kadib
Imaatinka Airpods ayaa sii socota oo dib u dhac ku yimid iyadoo sida ay sheegayaan warar xan ah ay sheegayaan inaysan imaan doonin ilaa Kirismaska ​​kadib dhibaatooyinka qaar ee ugu kala duwan awgeed.
Hoyga Google wuxuu horey u midoobay Netflix iyo Google Sawirro
Laga soo bilaabo Google Home, waxaad si fudud oo raaxo leh uga ciyaari kartaa waxyaabo badan oo warbaahin ah oo ka socda Netflix iyo Google Sawirrada TV-gaaga.
Johammer J1, mooto iyo batteriga guriga isla mar
Johammer J1, kaas oo kaliya u adeegi doonin sidii gaadiid ahaan, laakiin sidoo kale u adeegsan doona batariga guriga isla waqtigaas.
War wanaagsan; heerarka ugu horreeya ee Super Mario Run waxay noqon doonaan bilaash
Super Mario Run wuxuu bilaaban doonaa bisha Diseembar 15, isagoo siinaya heerarka ugu horreeya ee bilaashka ah kuwa isticmaala rakibidda.
Ma waxaad tahay ciyaar wanaag? Ciidanka Cirka ee Ingiriiska ayaa ku shaqaaleysiin kara
Ciidamada cirka ee Royal ayaa hadafyadooda u dejiyay cayaartoyda inay noqdaan "duuliyeyaal" mustaqbalka diyaaradaha aan cidi wadin ee cirka buuxiya.
Spotify waxay qorsheyneysaa inay bedesho xulashada muusikada ee isticmaalayaasha "bilaash"
Spotify waxay rabtaa inay sifiican ugu soo bandhigto isticmaaleyaasheeda "bilaash" waana sababta ay ugu shaqeyneyso qaab cusub oo taranka.
Lakabka Audi, kiiboodhka, jiirka, trackpad iyo kaarka sawirada isla waqtigaas
Audi Shalay si aan uga takhalusno dhammaan qalabka ay ku badan yihiin miisaska kuwa naga mid ah ee ku shaqeeya shaashadda kombiyuutarka.
Super Mario Run wuxuu u baahan doonaa xiriir joogto ah oo joogto ah
Muxuu Nintendo damacsan yahay inuu naga sii xirnaado inta aan ciyaareyno Super Mario Run?
Kuwani waa sawirradii ugu horreeyay ee loo yaqaan 'Zelda gameplay' ee 'Nintendo Switch'
Waxaan awoodnay inaan aragno gabal ka mid ah waxa uu noqon doono Super Mario Run ee iOS iyo gampleay ugu horreeya ee Zelda: Neefsashada Duurjoogta, ha moogaanin.
Asus ZenFone 3 Zoom wuxuu dhaafayaa TENAA oo leh laba kamaradood oo gadaal ah
Asus ZenFone 3 wuxuu arki karaa nolosha CES ee Las Vegas Janaayo 4 ka dib markii uu maray shahaadada Shiinaha ee TENAA.
Buundada ma joogtaa? Filimada loo daawado qoys ahaan iyada oo loo marayo Netflix
Caddaan cad! Sida lagu sheegay xayaysiiska cajiibka ah in Netflix uu ka tagay dhexda Puerta del Sol ee Madrid….
In 2017 waxaan arki doonaa laptops la Windows 10 iyo Qualcomm ee Snapdragon chip
Tani waxay ka dhigan tahay in laptops-yada leh Windows 10 iyo Chips-ka Snadpragon ee bixiya dhumuc aad u dhuuban, awood weyn iyo waxtarka la iibsan karo.
Samsung Experience waa lakabka shakhsi ahaaneed ee aasi doona TouchWiz
Markii wax aad u yar ka hadheen dhamaadka sanadkan 2016 iyo Android Nougat 7 ayaa ku jiray ...
Abka Google wuxuu hadda u qaybiyaa kaararka macluumaadka 2 tab
Abka Google wuxuu sameeyay laba tab oo kala qaybiya macluumaadka si isa soo taraysa u buuxinaya quudiyaha isticmaalaha: midna wararka iyo kan kale kaararka
Koox burcad ah ayaa xaday in ka badan 85 milyan oo xisaabaadka Dailymotion ah
Leaked Source ayaa goordhow shaacisay in Hackers uu ku guuleystay inuu ka xado in ka badan 85 milyan oo akoon Dailymotion, oo ah adeeg geyn Faransiis ah.
Qeybinta Android 7.0 waxay noqoneysaa musiibo dhab ah
Kaliya 0,4% qalabka Android ee suuqa ku jira ayaa wata nooca ugu dambeeyay ee nidaamka hawlgalka Google
Samsung Galaxy S8 hubaal ma lahaan doono deked maqal
Waxay u muuqataa in la xaqiijiyay in Samsung Galaxy S8 uusan lahaan doonin deked headphone ah, laakiin leh USB-C.
Android 7.1.1 Nougat waxay u timid qaar ka mid ah aaladaha Google
Xanta ku saabsan cusbooneysiinta cusub ee aaladaha ugu dambeeyay ee Google, Google Pixel, ayaa noqotay ...
Naqshadaynta Xusuus-qorida 7 mar labaad iftiiminta dhibaatooyinkeeda
Waxaa macquul ah in tani ay tahay mawduuc soo noqnoqda qaar badan oo ka mid ah kuwa meesha jooga, laakiin runtii ma jirto sabab rasmi ah oo loo ...
Kuwani waa taleefannada casriga ah ee lagu cusbooneysiin doono Android 7.0 Nougat
Android 7.0 Nougat horeyba waa rasmi oo waxaan ku tusineynaa liiska taleefannada casriga ah ee la cusbooneysiin doono, kuwaas oo aan ku dari doonno terminaalno maalmaha soo socda.
Batari aad u weyn ayaa sabab u ahaa dhibaatooyinka Galaxy Note 7
Qof kastaa wuxuu rabaa inuu ka faaloodo dhibaatooyinka Galaxy Note 7 maantana waxaan ogaanay sababaha suurtagalka ah ee qaraxyada xarunta.
Kuwani waa qeexitaannada suurtagalka ah ee Surface Pro 5
Surface Pro 5 ayaa si rasmi ah dhowaan loo soo bandhigi doonaa isla markaana xilligan xaadirka ah waxaan horeyba u awoodnay inaan ogaano qeexitaankiisa mahadsanid daadashada awgeed.
Barnaamijyada ugu fiican ee 2016, sida laga soo xigtay Google
Google waxay hada shaacisay codsiyada ugufiican sanadka ee aan hada dhamaanayno.
Netflix horeyba waxay u oggolaaneysaa soo dejisteyaasha inay ku ciyaaraan waxyaabaha qadka ka baxsan
Adeegga soo dejinta waxyaabaha loogu talagalay Netflix horeyba wuu u shaqeynayaa, maaddaama maaddada ay hadda ku dhawaaqday ...
Diiwaanka Internetka ayaa ku dhawaaqay inuu u guurayo Kanada
Kaydka Internetka, maktabadda dijitaalka ah ee boggaga internetka, buugaagta ebook ..., ayaa hadda lagu dhawaaqay go'aankeeda ah in dhammaan kaabayaasheeda loo raro Kanada.
Mac-yada ku dari doona liiska duugoobay ee Apple bisha Diseembar waa ...
15-inch iyo 17-inch MacBook Pros, Noocii Hore ee 2011, 13-inch MacBook Mid 2009, iyo Mac mini ka…
Netflix VS HBO Spain, awoodda Pablo Escobar ee ka dhanka ah The Sopranos
Netflix ama HBO? Taasi waa su'aasha aan maanta dooneyno inaan xallino, waxaan sameyn doonnaa isbarbardhig ujeedadiisu tahay oo dhammaystiran inta suurtagal ah
Samsung waxay ku dhawaaqday isbeddelada istiraatiijiyadeed ee lagu kordhinayo Qiimaha Shirkadda
Samsung ayaa ku dhawaaqday isbeddelo istiraatiiji ah iyada oo ujeedkeedu yahay oo keliya kordhinta qiimaha hadda ee shirkadda ku nool saacado yar ka dib guuldarrooyinka qaarkood.
Cyanogen Inc, ceyrintiisa iyo mustaqbalka magaalada Kondik
Dhammaantood waa hooska iyo nalalka mustaqbalka ee shirkadda Cyanogen Inc., oo aan ognahay maanta inay dhigeyso qayb ka mid ah shaqaalaha.
Samsung waxay daraaseysaa suurtagalnimada in loo qaybiyo laba shirkadood
Talaadada soo socota, Nofeembar 28, guddiga sare ee Samsung ayaa kulmi doona si ay go'aan uga gaaraan in shirkaddu laba u kala baxayso iyo in kale
Tani waa fikradda ZTE ee nubia-yar-yar
Fikradda ZTE Nubia waxay ku dareysaa xisbiga 'bezel-less' oo leh kala duwanaansho gees ilaa gees ah iyo qaabeynta 'slide-out'.
24-inch shaashad la qaadan karo oo loogu talagalay taleefankaaga casriga ah ama laptop-ka
Shaashadan 24-inji ah ee la qaadan karo oo loo yaqaan 'SPUD' ayaa kaa saari doonta dhibaato badan, waxaan si dhab ah uga fiirsanayaa helitaankeeda.
LG G6 iris scanner ayaa ogolaan doona lacagaha mobilada lagu bixiyo
Aynu aragno waxa nidaamkan lacag-bixinta ah ee moobilka iris-ka ah ee LG ay ku dari doonto G6 uu ka koobnaan karo.
Telefoonka dusha sare wuxuu ku dhejin karaa Snapdragon 835
Xanta ayaa sii socota oo ku saabsan taleefanka dusha sare ee shirkadda 'Microsoft' waxayna markan noo sheegeen inay ku dhejin karto processor processor Snapdragon 835 ah.
MediaTek 35nm deca-core Helio P10 SoC qeexitaannada ayaa xaday
Qalabka MediaTek ee Helio P35 ayaa soo bandhigi doona toban qaybood iyo 10nm naqshad dhisme si loo sii daayo mar seddexaad seddexaad ee 2017.
Naqshadeeyaha Xbox One S Andrew Kim ayaa ku biiraya Tesla
Tesla wuxuu sii wadaa inuu kahadlo dhamaan dhaqdhaqaaqyadiisa hadana wuxuu sidaas u sameeyaa sababo la xiriira saxiixa dhow ee mid ka mid ah ...
Xiaomi Mi5C wuxuu ku kacayaa wax ka yar 140 euro sida ku cad xogaha ugu dambeeyay
Waxaan kusii wadaynaa wararka laxiriira Xiaomi maalmahan hadana hada waxa umuuqda boodh ladilay ...
Samsung waxay bedeshaa xalka asalka ah ee Galaxy S7 ee beta ka Nougat ilaa 1080p
Cajiibka ayaa ah in beta-ka Android Nougat ee Galaxy S7 uu dhaqaajiyo xalka HD Full HD asal ahaan halkii Quad HD.
Zang Zhiyuan, agaasimaha suuq geynta Xiaomi ayaa beeniyay wararka xanta ah ee Xiaomi Mi Mix Nano
Xantan ku saabsan soosaarida cusub ee Xiaomi Mi Mix Nano ayaa in yar qaadatay, tan iyo markii agaasimaha laftiisu ...
Telegram waa la cusbooneysiiyaa iyadoo la bilaabayo Booqashooyinka Degdegga ah iyo barta ay ku shaqeyso ee wax lagu qoro
Telegram ayaa mar kale la cusbooneysiiyay, iyadoo lagu darayo Muuqaalka Degdegga ah iyo astaamo cusub oo horeyba loogu heli karo nooca cusub ee hadda la soo dejisan karo
OnePlus 3 wuxuu heli doonaa cusbooneysiin inkasta oo imaatinka cusub ee OnePlus 3T
Tani waa wax dhowr isticmaale madaxooda ku lahaa tan iyo markii ay arkeen imaatinka cusub ee OnePlus ...
3 ilbiriqsi fiidiyow qufulaya iPhone ama iPad
Waxaan wajaheynaa fiidiyow u muuqda inuu awood u leeyahay inuu xayiro iPhone iyo iPad ka dib markii aan ku aragnay ...
Maango waxay ugu magac dartay Wallapop suuq alaabteeda la xaday
Markan wuxuu ahaa madaxa amniga Mango oo ku calaamadeeyay Wallapop inuu yahay suuqa rasmiga ah ee alaabada laga soo xaday bakhaaradeeda.
Eve V waa beddelka ugu fiican ee Microsoft Surface Pro
Eve V, marka la eego shaqeynta iyo naqshadeynta, aad ayey ula mid tahay taas oo kaa dhigeysa inaad si dhab ah uga fikirto haddii ay mudan tahay inaad iibsato Surface Pro.
Xisaabi haddii aad u qalanto inaad dembi ku gasho codsigan moobiilka ah
Marka la soo koobo, codsi ayaa loo sameeyay si dambiilayaasha ay u ogaadaan miisaanka sharciga ee ku dhici doona iyaga haddii la qabto.
HTC waxay bilaabaysaa 10 evo, nooca caalamiga ah ee HTC Bolt
Haddii aad raadineyso inaad iibsato taleefanka cusub ee HTC 10 evo, waa inaad ku sameysaa khadka tooska ah, maadaama shirkaddu aysan xiriir la lahayn wax hawl wade ah.
Nokia waxay ku soo bandhigi doontaa taleefankeeda casriga Mobile World Congress 2017
Way iska cadahay in kuwa jecel shirkada ay durbaba doonayaan inay arkaan wax cusub kadib ...
Kooxda xayeysiinta ee Sony PlayStation 4 ayaa ka bilaabay YouTube-ka fiidiyowgan gaarka ah ee xayeysiinta ah ee aan hoos kaaga tagi doonno.
Huawei Mate 9 Lite, awood saafi ah oo ixtiraamaysa jeebkeena
Huawei wuxuu bilaabay Mate 9 Lite, oo ah nooc awood leh laakiin leh xaddidaad ka dhigaysa mid la awoodi karo dhammaan isticmaaleyaasha.
Iibsadayaasha GoPro Karma waxay heli doonaan HERO5 bilaash ah
GoPro waxay go'aansatay inay magdhowdo adeegsadayaasha ay dhibaatadu soo gaadhay iyaga oo ku wareejinaya kamarad wax ku ool ah HERO5.
Barnaamijka Beddelka Batariga Apple ee iPhone 6s
Toddobaadkii hore waxaan ku dhawaaqnay qorshe lagu beddelayo shaashadda qaar ka mid ah Apple iPhone 6 Plus laakiin ...
Meizu si ay u daahfuraan taleefan cusub oo loo yaqaan 'Helio chip' bisha Noofambar 30
Meizu M5 Note waxaa la soo bandhigi doonaa sida la filayo Nofeembar 30. Taleefan yeelan doona qalab yar oo Helio P10 ah si uu markale u noqdo mid wanaagsan.
Maxaa laga daawan karaa Netflix qeybtaan labaad ee Nofeembar
Waxaan kugula talineynaa waxyaabaha ugufiican ee aad ka daawan karto Netflix inta lagu jiro qeybtaan labaad ee Nofeembar.
Amazon waxay lashaqeysaa Fiat iibinta gawaarida
Dhawaan Amazon waxay bilaabi doontaa iibinta gawaarida nooca Fiat iyada oo loo marayo degelkeeda
Megahonyaku, waa taleefanka gacanta ee tarjuma codkaaga isla markaaba
Sumadda Jabbaan ee soo hindisay hab lagu turjumo codkeenna waqtiga dhabta ah, oo maxaa diidaya, iyadoo la kordhinayo mugga marinka.
Gear S3 wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku isticmaasho Samsung Pay Android kasta
Iyada oo Samsung Gear S3 ah uma baahnin inaan helno taleefan Galaxy ah oo waajib ku ah haddii aan dooneyno inaan adeegsanno Samsung Pay.
Kuwani waa qaar ka mid ah Steam iyo Xbox Gold oo loogu talagalay Black Friday
Microsoft waxay u socotaa inay horumariso Jimcaha Madow ee Xbox iyagoo soo bandhigaya dalabyada laga bilaabo maanta oo ay sii dheereynayaan dhowr maalmood.
Barnaamijka dayactirka ee iPhone 6 Plus oo uu saameeyey "taabashada cudurka"
Shirkadda Cupertino ayaa sida caadiga ah fulisa dhaq dhaqaaqa noocan ah markay dhibaato ku qabaan qalabkooda ...
«Planet Coaster» oo ah jilid jilitaan cusub oo madadaalo ah
Maanta waxaan ku tusinaynaa muuqaalka rasmiga ah ee loo yaqaan 'Planet Coaster', oo ah jilid jilista baashaal cusub oo aan horay u sugeynay isku dayga iyo raaxeysiga
Iskuduwaha 'selfie craze' wuxuu yimaadaa dhalooyinka Coca-Cola, si dhab ah
Coca-Cola waxay go'aansatay in aalad sawir iska qaadis ah inta la cabayo Coca-Cola ay tahay ikhtiyaar wanaagsan oo lagu noolaan karo daqiiqadahan.
8 milyan oo ah macluumaadka gaarka loo leeyahay ee GitHub ayaa shabakadda u dusay
Koox burcad ah ayaa ku guuleystey inay jabiyaan dhamaan amniga goobta GitHub isla markaana la wareegaan in ka badan 8 milyan oo astaamo gaar loo leeyahay.
Waqtiga aan ku sagootinayno Android 8 natiijooyinka raadinta
Android 8 ayaa si dhakhso leh uga baaba'aya natiijooyinka raadinta Google markii ay bilaabanayaan wararka ku saabsan nooca xiga ee Android.
Dhibaatooyin halis ah oo ku saabsan iibka Pixels ee ku dhex jira Mashruuca Fi
Waxay u muuqataa in dadka isticmaala ee ka fekerayay inay dib u iibiyaan shirkadooda cusub ee Google Pixel inay leeyihiin ...
Shirkadaha waaweyn ee Tesla mar dambe xor uma noqon doonaan macaamiisha cusub
Tani waa mid ka mid ah wararka sheegaya in shirkadda caanka ah ee soo saarta baabuurta korontada ku shaqeysa ee Tesla ay naga yaabisay arrintan ...
Kuwani waa filimadii ugu horreeyay ee HBO Spain la xaqiijiyay iyo taxane
HBO hadda waxaa laga heli karaa Isbaanishka kuwani waa filimadii ugu horreeyay ee la xaqiijiyay iyo silsilado aan ku arki karno adeeggan caanka ah.
OnePlus 3 mar dambe lagama iibsan karo Mareykanka iyo Yurub
OnePlus wuxuu qaatay go'aan ah inuu joojiyo OnePlus 3 isagoo doorbidaya dhawaanahan la soo saaray OnePlus 3T, kaasoo la wareegaya sidii calanka.
Midka cusub ee OnePlus 3T ayaa durba ah mid dhab ah oo qiimihiisu yahay 439 euro
OnePlus 3T horeyba waa rasmi oo suuqa ayaa laga heli doonaa goor dhow iyadoo lagu qiimeeyo 439 euro. Kala duwanaanshaha OnePlus 3?; in yar.
Kabaha isboortiga ee Nike ee iskiis isku xirta ayaa suuqa soo gali doona bisha Diseembar 1
Kabaha is-isku-xidhka ayaa ah riyada qof walba, shirkadda Nike-na waxay iibin doontaa 1-da Diseembar, in kasta oo qiimaha uu kuugu muuqdo mid xad dhaaf ah
Afar koronto oo Google ah oo aadan aqoon
Ma ogtahay in Google ay leedahay kalkuleytar, turjumaan, qaamuusyo iyo waxyaabo kaloo badan? Hagaag, waa waqtigii la baran lahaa sida loo isticmaalo shaqooyinkan Google
Huawei Mate 9 Pro oo leh shaashad qaloocan ayaa hadda rasmi ah
Shalay waxaan ka dhawaajinay qaar ka mid ah sawirrada la sifeeyay ee Huawei Mate 9 Pro maantana waxaan ku soo toosnay imaatinka rasmiga ah ee terminaalka suuqa.
Wicitaanada fiidiyowga ee WhatsApp hadda qof walba wuu heli karaa
WhatsApp horeyba waxay u leedahay wicitaano fiidiyow ah oo ay heli karaan dhammaan isticmaaleyaasha maanta. Cusboonaysiin weyn oo loogu talagalay adeeggan wada sheekaysiga ah.
Google Play Music ayaa gabi ahaanba dib loo qaabeeyey si diirada loo saaro macnaha guud
Google waxay yeelan doontaa awood ay kaga jawaabto macnaha guud ee uu bixiyo adeegsadaha barnaamijyada sida Play Music si loogula taliyo liiska ugu fiican
Huawei Mate 9 Pro oo leh shaashad qalooca ayaa lagu arki karaa dhowr sawir oo xaday
Huawei wuxuu yeelan karaa nooc cusub oo ah Mate 9 oo la diyaariyey kaas oo lagu baabtiisi doono magaca Huawei Mate 9 Pro oo leh shaashad qafiif ah.
Final Fantasy XV wuxuu leeyahay Audi R8 u gaar ah oo loo diyaariyey taageerayaasha ugu badan
Taageerayaasha ugu xamaasada badan shirkadda waxay awoodi doonaan inay gacanta ku dhigaan nuqul gaar ah oo Audi R8 ah, Audi R8 Star ee Lucis.
Toddobaadka dhammaadka dambe waxaad si bilaash ah uga ciyaari kartaa Overwatch PC, PS4 iyo Xbox One
Haddii aad rabto inaad yeelato ciyaaro aad u qurux badan oo loogu talagalay 'Overwatch' bilaash, dhammaadka usbuuca soo socda waxaad taariikh weyn ku lahaan doontaa PC, PS4 iyo Xbox One
"Melania Trump oo qaawan" ayaa ah tan ugu badan ee maalmahan laga baadi goobayo Google Spain
Erayada "Melania Trump oo qaawan" ayaa ah tan ugu badan ee loo adeegsaday mashiinka raadinta caanka ah ee maalmihii ugu dambeeyay Spain.
Nintendo Classic Mini NES waa la iibiyay oo mala awaal ayaa bilaabmaya
Suuq "gacan labaad" ayaa soo baxay kaas oo Nintendo Classic Mini dib looga iibinayo ku dhowaad laba jeer qiimihiisa.
Red Alert 2 ee VR waa safar aad u qurux badan oo lagu soo celinayo ciyaar halyeey ah
Haddii aad taageere u ahayd ciyaarta istaraatiijiyadeed-waqtiga-dhabta ah Digniinta Cas 2, qaabkan fikradda ah ee 'VR' ayaa si fudud kuu qarxin doona.
Maxkamadda Sare waxay ku dhawaaqeysaa buugga dijitaalka ah ee dijitaalka ah
Maxkamadda Sare waxay go'aansatay inay ka hadasho arrintan, iyadoo caddeynaysa in nidaamka dijitaalka ah ee shaqeynayay illaa 2012 uu yahay mid aan waxba ka jirin.
HTC Bolt oo leh shaashad 5.5-inji ah iyo Android Nougat ayaa hadda rasmi ah
Ka dib warar xan iyo xogo badan ka dib, HTC Bolt wuxuu hada si rasmi ah ula socdaa shaashad aad u weyn oo 5.5-inji ah iyo Android Nougat.
Ololaha Kirismaska ​​ee Apple ayaa durba bilaabmay
Ololaha Kirismaska ​​ee Apple ayaa durbaba bilaabmay iyo dhammaan dadka isticmaala ee haysta ID Apple ama ka ...
Telegram-ku wuxuu ku soo noqday qaabkiisi, ugu yaraan madaxweyneyaasha
Vladimir Putin iyo Mariano Rajoy, waxay go’aansadeen inay ugu hambalyeeyaan Donald Trump guushii uu ka gaadhay doorashooyinka iyada oo loo marayo habkan gaarka ah ee isgaarsiinta.
Diyaar ma u tahay Jimcaha Madow? 1.267 XNUMX M iibsasho ayaa la filayaa
Waxaan kuu sheegeynaa waa furayaasha Jimcaha Madoow ee sanadkan, tag diyaarinta kaarkaas deynta ah, maxaa yeelay way qiiqaysaa.
Kaliya 1 maalin ayaa ka hartay dalabyada gaarka ah ee Ulefone
Haddii aad raadineyso taleefan qiimo jaban, Ulefone waxay bixisaa maalin qaas ah berri, Nofeembar 111 oo ay ku jiraan rasiidh.
Google wuxuu doonayaa inuu mideeyo nidaamyada lacag-ku-shubista degdegga ah ee Android
Google waxay dooneysaa inay arintaan joojiso iyadoo sii deynaysa dukumiintiga qeexida qeexida Android, si loo calaamadiyo wadada horay loo sii wado ee ku saabsan lacag bixinta degdega ah.